ကြွယ်ဝသောအသက်တာ - ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိဘုရားသခင့်ဘုရားကျောင်းဆွစ်ဇာလန်
မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ > မဂ္ဂဇင်းအာရုံစိုက်ယရှေုသညျ 2018-02 > များစွာသောတစ်ဦးကအသက်တာကို
“ ခရစ်တော်သည်သူတို့၌ကြွယ်ဝသောအသက်ကိုရစေခြင်းငှာကြွလာတော်မူသည်” (ယောဟန် ၁၀း၁၀) ။ ယေရှုသည် သင့်အား စည်းစိမ်ဥစ္စာကြွယ်ဝသော အသက်တာတစ်ခုကို ကတိပေးခဲ့ပါသလား။ လောကဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို ဘုရားသခင်ထံ သယ်ဆောင်လာပြီး သူ့ထံမှ တောင်းဆိုခြင်းသည် မှန်ကန်ပါသလော။ မင်းမှာပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုများလာတဲ့အခါ၊ အဲဒါတွေကကောင်းချီးတွေပိုရလာသလား။
Jesus sagte, «Seht zu und hütet euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat» (Lukas 12,15). Der Wert unseres Lebens wird nicht nach unseren materiellen Reichtümer gemessen. Im Gegenteil, anstatt unsere Besitztümer untereinander zu vergleichen, sollen wir zuerst nach dem Königreich Gottes trachten und uns nicht über unsere weltliche Versorgung den Kopf zerbrechen (Matthäus 6,31-33) ။
Paulus kennt sich ganz besonders gut aus, ein erfülltes Leben zu führen. Unabhängig davon, ob er erniedrigt oder hoch gepriesen wurde, sein Magen reich gefüllt oder knurrend leer war, er in geselliger Gemeinschaft war oder sein Leid alleine trug, war er immer zufrieden und dankte Gott in jeder Lebenslage (Philipper 4,11စာ-၇; ဧဖက် 5,20). Sein Leben zeigt uns, wir erhalten ein Leben im Überfluss unabhängig von unserer finanziellen und emotionalen Lebenssituation.
သခင်ယေရှုသည် ဤကမ္ဘာမြေသို့ သူလာရသည့် အကြောင်းရင်းကို ပြောပြသည်။ သူသည်ဘဝတစ်ခုကိုအပြည့်အဝပြောပြီးထာဝရအသက်ကိုဆိုလိုသည်။ “ အပြည့်အဝ” ဟူသောစကားစုသည်ဂရိ (Greek perissos) မှဆင်းသက်လာပြီး“ ရှေ့ဆက်ရန်၊ နောက်ထပ်; လူအားလုံးထက် ကျော်လွန်၍ သိသာထင်ရှားသည့်သေးငယ်။ ထင်ရှားသောစကားလုံး "ဘဝ" ကိုရည်ညွှန်းသည်။
သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားအနာဂတ်ဘ ၀ ကိုအပြည့်အဝပေးမည်ဟုကတိပြုရုံသာမကယခုကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌သူ၏ရှိနေခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှုကိုတိုင်းတာ။ မရသောအရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတွင်သူ၏တည်ရှိမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုတန်ဖိုးရှိစေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဏ်စာရင်းရှိနံပါတ်များသည်နောက်ကွယ်မှေးမှိန်သွားသည်။
ယောဟန်အခန်းကြီး ၁၀ တွင်သိုးထိန်းအကြောင်းခမည်းတော်ထံတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင်ဘုံရှင်အဖနှင့်ကောင်းသော၊ အပြုသဘောဆောင်သောဆက်ဆံရေးရှိရန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာထိုဆက်ဆံရေးသည်ကျေနပ်ရောင့်ရဲသောအသက်တာအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထာဝရအသက်ကိုရရုံသာမကဘုရားသခင်မှတစ်ဆင့်ကိုယ်တော်နှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ခွင့်ရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
လူတို့သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုကိုရုပ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်ဆက်နွှယ်သော်လည်းဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားရှုထောင့်မှကြည့်ရှုသည်။ ချစ်ခြင်း၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်း၊ ငြိမ်သက်ခြင်း၊ စိတ်ရှည်ခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ ကြင်နာခြင်း၊ သစ္စာရှိခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ ချုပ်တည်းခြင်း၊ ရိုးရိုးသားသားနဲ့သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်း။ ရုပ်ပစ္စည်းကြွယ်ဝမှုကသူတို့ကိုအပြည့်အဝမပေးပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပေးတယ်။ ဘုရားသခင်ထံသင်၏စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်လေလေ၊ သင်၏ဘ ၀ သည် ပို၍ ကြွယ်ဝလာလေလေဖြစ်သည်။